Yintoni enokuyenza xa i-iPad ibiwe - i-Geofumed
Yintoni enokuyenza xa i-iPad ibiwe
NgoJanuwari, 2014 Apple - Mac
Hamba umcimbi ungabonakala, kodwa kungekudala okanye kamva udinga ukwazi ukuba wenzeni xa uba i-iPad Nangona ezinye iinkalo zisebenza kwi-iPhone, i-iPod Touch kunye ne-iMac, ndifuna ukuyisebenzisa ngokunjalo ukuze ndiyihloniphe into endiyifunayo ngolunye usuku ngaphaya koko:
1. Gwema ukutyhila ngokusela njengoko kunokwenzeka.
I-iPhone iyithuluzi lokunxibelelana olufunekayo ngamaxesha onke, i-iPad yinto yokusebenza. Watshintsha iphepha ledayari, ipensela, i-laptop, ikhamera, incwadi kunye nomdlalo wezemidlalo. Ngoko kufuneka sigweme ukutyhila ngokungenasidingo, okulindele ukutshitshisa izinto zokusebenzisa iikhompyutha ziza kulandela kwaye ziza kujonga nayiphi na ingqwalaselo.
Ukuba uya kusemini, ungayishiyi kwidesksi, kodwa phantsi kwekhiyi kunye nencoko, nangona wonke umntu eofisi yakho ehloniphekileyo.
Ukuba uyayikhohlwa, ungayifaki nayiphi na indawo apho kungxamisekileyo.
Ukuba uya kudla kunye nomhlobo, ungayithathi, isisitye somsebenzi, kungekhona ukuphazamiseka kwixesha ofuna ukuzinikezela kubantu abalulekileyo.
Ukuba umkhondo kwi imoto, musa anxibe ngayo kwicala esihlalweni, emnyango itanki okanye itreyi ngaphambili. Musa ukuthwala umntwana wakho kwisitulo sokugqibela udlala i-Angry Birds, ungayisebenzisi ngenkathi uqhuba. Yaye ngaphezu kwako konke, musa ukuthwala iglasi evulekileyo kwiindawo ezisezidolophini, yonke imihla kuxhaphake kakhulu kunokuba isithuthuthu siyeka emnyango elandelayo kwi ukukhanya lwezithuthi okanye kade, onegunya ukunyanzela ukuba mobile, nangxowa yamphako, okanye nantoni na emehlweni .
Ukuba ufihliwe emotweni, kunokuba luncedo kunokuba ucinge, ingakumbi ukuba imoto yakho ibiwe.
Ukuba uya kwindawo yokuthengisa kunye nabantwana bakho, ukuba akuyimfuneko, musa ukuyithatha. Ukwahlula eso sixhobo somsebenzi kwimpilo yentsapho, ekhaya ungayisebenzisa ukuba ubukele i-Facebook okanye udlale kunye nabantwana bakho (kuba nayo isebenza njengethuluzi lokuzonwabisa)
Yaye ukuba kufuneka uyithathe, qiniseka ukuba uyazi ukuyifihla. I-iPad mini ifaka phakathi kwincwadana, kwiphepha elingaphakathi kwengubo, nangaphantsi kwengalo.
2. Yazi kwangaphambili oko uza kukwenza xa ulahlekelwa yiyo.
Akukho mntu ulindele ukuba kwenzeke, kodwa kukulungele ukuba ulungele oko, ngoko gcina ezi ngcebiso.
Gcina i-GPS isebenze rhoqo. Ezi zinto zizisa idivaysi, ngoko ke ukuba ibiwe, ungayilandela intanethi apho ikhona, okanye ubuncinane apho isela liye khona.
Gcina ifowuni yokukhangela i-iPad efakwe, kwaye usebenze ukusebenza kwizicwangciso eziqhelekileyo. Kwiinguqu ezidlulileyo ze-iOS oku kungakhubazeka, ngoku kufuna idinga lomsebenzisi. Gcina ukhumbule ukuba isebenza kuphela xa ikhomputha yakho ixhunyiwe kwi-intanethi, ngoko ke ukuba uhlala kwelinye ilizwe kwaye ungenayo i-SMS esebenzayo kuya kuba nzima.
Gcina iqhosha elisebenzayo kwi-iCloud.com, kwaye uzame kwangaphambili indlela indawo yokusebenza ngayo ifowuni isebenza ngayo. Ukuba isixhobo sakho sebiwe esitratweni, kungekho sizathu silandela isela, uye ngqo kwi-intanethi uze ucinge malunga noko ukwenza. Ukuba ushiye ikhehliwe, ufuna kuphela ukuchonga apho ikhona. Kungenjalo uyakwazi ukuqwalasela ngokuqaphela ukuba umyalezo efika kwi iposi xa ikhompyutha kanga kwi Internet, kufuneka ukuba imo ubusela khetho, apho uya kuhlala isikhundla kwimephu ngexesha ngalinye kokuxhuma.
Gcina ikhiye yokukhiya isebenza. Kungenakunqweneleka ukuba kulungelelanise ngaliphi na ixesha, kodwa ngaphambi kobusela okanye ukulahleka, kukunika ixesha ngaphambi kokuba usebenze ukuyibuyisela kwakhona ngenxa yokwesaba ukuba bathabatha ulwazi olubalulekileyo.
Faka ii-akhawunti ozicingayo zivulekile kwi-iPad kwaye uvale iiseshoni ezisebenzayo. I-Facebook kunye ne-Gmail vumela oku ngaphandle kokutshintsha iphasiwedi. Khumbula oko akhawunti uhlobo asetyenziswa rhoqo lokhetho baye kubo ekujoliswe, ezifana Twitter, Skype, kwibhokisi, ukuba kuyimfuneko, iqhosha tshintsho, oku kunokwenziwa ngokuzolileyo yi ngoxa khompyutha itshixiwe.
Xa ii-akhawunti zivaliwe, ukuba isixhobo asixhunyiwe kwi-intanethi unokwazi ukuyivula, ukuba isela isisithakazelo ungazama ukuxhuma kwi-Intanethi. Ukuba unezithombe ezichanekileyo kunye neDropbox, unokwazi ukubona iifoto ezenziwa ngumfana kwaye ungasetyenziselwa into ethile, nokuba ukuphosa iziqalekiso.
3. Qinisekisa ukuba wenzeni ukuyibuyisela
Ukuba ubona ukuba ifowuni isanxibeleleneyo, enye indlela yokuyilandela i-iPhone exhunywe kwi-Intanethi, kufuneka urejistise apho ofuna ukukhangela enye idivaysi, sebenzisa iphasiwedi ye-Apple kwaye uyayilandela. Musa ukuyilandela ngeenyawo.
Ukuba unesakhiwo esifanayo okanye iofisi, cwaka, vele ufike ngokusondeleyo kwaye unako ukuvula isandi. Ingavakala kwisibhambathiso sempahla yangasese, kwi-suitcase yomsebenzi-ntsebenziswano okanye nakwizintambo zowesifazane osemdala ... Yazi oko aya kukuxelela.
Ukuba uhlala kwindawo kawonkewonke, zama ukuyifumana kodwa ungayi yedwa, ingaba ngumlindi wesiseko.
Ukuba ukhona kwi-pawnshop uza kufuna i-bill kwaye mhlawumbi umyalelo wamapolisa.
Ukuba uhlala kwindawo eyingozi, cinga kwakhona ukuba ubomi bakho bunjani. Kungenzeka ukuba ugqiba ukulahlekelwa enye i-iPhone yakho, imoto kunye nobomi. Ngokuxhomekeke kwilizwe apho ukhona khona, khangela ukuba unokuthembela kumapolisa wendawo ukuze ufumane umsebenzi wokuhlangula, akukho mntu ufuna ukufumana iintshaba kwixesha elizayo ngenxa ye-artifact engenalo umphefumlo.
4. Yintoni ongayenza ukuba awukwazi ukuyilandela
Iinguqulelo zangaphambili ze-iPad zazilula kakhulu ukusetha kwakhona okanye ukukhubaza i-GPS. Bayaqhubeka bekwenza njalo ngenxa yokuba bengamkeli iinguqu ze-iOS zakutsha nje.
Nangona kunjalo, kunokwenzeka kuwe ngamadivayisi amatsha. Kukho amasela akhethekileyo kwaye ngokunyanisekileyo akukho siqinisekiso ukuba xa isixhobo siphelile siyafumaneka.
Ukuba ufumanisa ukuba idivayisi ayifumaneki, ukusuka kwi-iCloud akhawunti ukhethe ukususa umxholo. Ngale nto uya kuzinza.
Ungakulibala ukubika ubusela, kuba luyakubonakala kwimeko yomthetho kwaye ingxelo ingakuphepha ukuphazamiseka. Kwakhona bane-chip ephathekayo ukuba izigwenxa zingasebenzisa ukuphanga.
Musa ukuhlupheka, ungalili, ungabulawa, okanye uvumele umfazi wakho ashumayele kuwe. Mkele nje oko kwenzeke kuwe nge maje. Mxolela igama, kodwa umhla olahlekelwa nguwo awuyi kuziva ungaphantsi.
Emva koko cinga ngeendlela zokuthenga enye kwaye ukususela ngoku kungcono ukuba ube ngumnye umzekelo. Ukuba ubuyisebenzise unyaka, uya kubona ukuba awukwazi ukuhlala ngaphandle kwayo.
Ndiza kubuza: Kutheni isitishi esipheleleyo esibiza iRandi ye-9,000 ayinayo ifowuni yokuyifumana? I-iPod elula ye-250 dollar inayo; Ngokuqinisekileyo siya kuba nokukulungele ukuhlawula ngaphezulu.
Ulungiswe ngeBlogPad Pro
Post edlulileyo«Edlulileyo BlogPad - I-WordPress Editor ye-iPad
Post Next Yiyiphi i geomat kufuneka ikwazi malunga nomgangatho we-LADM wolawulo lomhlabaOkulandelayo "
Enye Impendulo "Yintoni ongayenza ukuba i-iPad yakho ibiwe"
hahaha Andizi ukuba kutheni ndicinga ukuba kuthathwe ibali lobomi lobomi